Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo la horumarinayo tikniyoolajiyadda wax lagu beero ee fangaska la cuni karo, sii ballaarinta isdaba-joogga ah ee aagga la beero iyo tirada sii kordheysa ee noocyada wax lagu beero, boqoshaadu waxay noqotay dalag lacageed oo muhiim u ah wax soo saarka beeraha. Meesha ay ka baxdo likaha, qashin badan ayaa la soo saaraa sanad walba. Ku dhaqanka wax soo saarku wuxuu muujinayaa in 100kg oo ah walaxda taranta ay goosan karto 100kg oo ah boqoshaada cusub ayna heli karto 60kgQashinka haraaga likaha isla waqtigaas. Qashinka ma aha oo kaliya inuu wasakheeyo deegaanka, laakiin sidoo kale wuxuu keenaa qashin fara badan oo kheyraad ah. Laakiin adeegsiga qashinka haraaga likaha si loo sameeyo bacriminta bio-organic waa mid caan ah, taas oo kaliya aan ogaanin ka faa'iideysiga qashinka, laakiin sidoo kale waxay hagaajinaysaa ciidda adoo codsanayahadhaaga likaha bacriminta bio-organic.
Hadhaaga likaha ayaa hodan ku ah nafaqooyinka loo baahan yahay abuur iyo koritaanka khudaarta iyo miraha. Halsano kadib, waxaa loo sameeyaa bacrimin-dabiici ah, oo saameyn wanaagsan ku leh beero. Marka, sidee hadhaaga likaha u beddelaa qashinka hanti?
Isticmaalida halsano haraaga likaha si loo sameeyo talaabooyinka habka bacriminta bio-organic:
1. Qiyaasta qiyaasta: 1kg oo ah wakiilka microbial ayaa qallajin kara 200kg oo hadhaaga likaha. Haraaga likaha qashinka waa in marka hore la jajabiyaa ka dibna la khamiiriyaa. Wakiilada microbial ee la qasi jiray iyo hadhaaga likaha ayaa si fiican loo qasay oo la is dulsaaray. Si loo gaaro saamiga C / N ee saxda ah, xoogaa urea ah, digada digaaga, sisinta sisinka ama qalabka kale ee kaabayaasha ah ayaa si habboon loogu dari karaa.
2. Xakamaynta qoyaanka: ka dib marka la isku daro haraaga likaha iyo qalabka kaabayaasha si siman, ku buufin biyo galka walxaha si siman bamka biyaha oo si joogto ah u rog illaa qoyaanka alaabta ceyriinka ah ay ku dhowdahay 50%. Qoyaanka hooseeya ayaa gaabin doona halsano, qoyaanka sareeya wuxuu u horseedi doonaa hawo xumo duugga ah.
3. Compost rogaya: rogista xargaha si joogto ah. Microorganism-ka ayaa si aamusnaan ah u tarmi kara una nabaad guurin kara waxyaabaha dabiiciga ah marka loo eego xaaladaha ku habboon biyaha iyo oksijiinta, sidaas awgeedna wuxuu abuurayaa heerkul sarreeya, isagoo dilaya bakteeriyada cudurada keena iyo iniinyaha cawska, wuxuuna ka dhigayaa arrinta noolaha inay gaarto xaalad deggan.
4. Xakamaynta heerkulka: heerkulka bilowga ah ee halsano wuxuu ka sarreeyaa 15 ℃, halsano wuxuu noqon karaa hal toddobaad. Xilliga jiilaalka heerkulkiisu hooseeyo iyo waqtiga halsano ayaa ka dheer.
5. Dhammeynta halsano: hubi midabka geedaha boqoshaada, waa khafiif khafiif ah ka hor halsano, iyo bunni mugdi ah khamiirka ka dib, xargaha ayaa leh dhadhan likaha cusub ka hor halsano. Dhaqdhaqaaqa korantada (EC) sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in lagu xukumo, guud ahaan EC way hooseysaa ka hor halsano, oo si tartiib tartiib ah ayuu u kordhay inta lagu jirohabka halsano.
U isticmaal hadhaaga likaha ka dib halsano si aad u tijaabiso meelaha ka soo baxa kaabashka Shiinaha, natiijooyinka ayaa muujiyay in bacriminta dabiiciga ah ee ka samaysan hadhaaga likaha ay waxtar u leedahay hagaajinta dabeecadda bayoolajiga Shiinaha, sida caleenta Shiinaha, dhererka petiole iyo ballaca caleenta ayaa ka sarreeya kuwa caadiga ah, iyo soosaarka kaabashka Shiinaha wuxuu kordhay 11.2%, maadada chlorophyll waxay kordhay 9.3%, sonkorta milmay waxay kordhay 3.9%, tayada nafaqada ayaa soo hagaagtay.
Waa maxay arrimaha u baahan in la tixgeliyo ka hor inta aan la dhisin warshad bacriminta bio-organic?
Dhisme warshad bacriminta bio-organic waxay u baahan tahay tixgelin dhammaystiran oo ku saabsan ilaha maxalliga ah, awoodda suuqa iyo gacan ku haynta, iyo wax soo saarka sanadlaha ah guud ahaan waa laga bilaabo 40,000 ilaa 300,000 tan. Wax soo saarka sanadlaha ah ee 10,000 illaa 40,000 tan wuxuu ku habboon yahay dhirta yaryar ee cusub, 50,000 ilaa 80,000 tan oo dhir dhexdhexaad ah iyo 90,000 ilaa 150,000 tan oo dhirta waaweyn ah. Mabaadi'da soo socota waa in la raaco: sifooyinka khayraadka, xaaladaha ciidda, dalagyada ugu muhiimsan, qaab dhismeedka dhirta, xaaladaha goobta, iwm.
Ka waran qiimaha sameynta warshad bacriminta bio-organic?
Khad yar oo soosaarka bacriminta dabiiciga ah maal gashigu waa yaryahay, maxaa yeelay macaamiil walboo cayriin iyo shuruudaha gaarka ah ee habka wax soo saarka iyo qalabku way kala duwan yihiin, markaa qiimaha gaarka ah halkan laguma soo bandhigi doono.
Dhameystiran hadhaaga likaha khadka soosaarka bacriminta bio-organic guud ahaan wuxuu ka kooban yahay taxane ah geedi socod wax soo saar iyo qalab kala duwan oo wax lagu farsameeyo, qiimaha qaaska ah ama wuxuu kuxiranyahay xaalada dhabta ah, iyo isticmaalka qarashaadka dhulka, kharashaadka dhismaha aqoon isweydaarsiga iyo iibka iyo kharashaadka maamulka ayaa sidoo kale loo baahan yahay in la tixgaliyo isla waqtigaas . Ilaa iyo inta habka iyo qalabka si sax ah loo waafajinayo oo xulashada alaab-qeybiyeyaasha wanaagsan la xusho, aasaas adag ayaa loo dhigaa wax soo saar dheeri ah iyo faa'iido.